Ndezvipi zvakaipa? | Bezzia
Maria Jose Roldan | 16/07/2021 22:51 | Vanamai
Zvakajairika kuvakadzi vazhinji maawa makumi mana nemasere mushure mekuzvara, iva nezvibodzwa zvine simba muchibereko. Kudzvanywa uku kunodaidzwa kuti zvisirizvo uye kwakanyanya uye kunorwadza.
Izvo zvambotaurwa zvisizvo zvakajairwa uye zvinokonzerwa nenyaya yekuti chibereko chinofanira kudzokera pakukura kwayo. Munyaya inotevera tichazotaura newe zvakadzama nzira yezvakaipa uye zvekukosha kwavanoita zvekudzoreredzwa kwemukadzi anenge asununguka.
1 Hukama pakati pezvakaipa nekuyamwisa
2 Kurwadziwa kwekutadza
3 Nei zvakaipa zvichikosha
Hukama pakati pezvakaipa nekuyamwisa
Pane hukama chaihwo pakati peizvi chibereko chechibereko uye kuyamwisa. Nguva dzese mwana paanotora zamu, muviri wemukadzi unoburitsa mahormone oxytocin, zvichitungamira mukukanganisa. Ndokusaka kuyamwisa kwakakosha kana zvasvika pakuvhara mitsipa yeropa inowanikwa muchibereko uye nzvenga kubuda kweropa mukati.
Misikanzwa inorwadza uye yakasimba uterine contractions iyo inowanzo gara kusvika maawa makumi mana nemasere mushure mekuzvara. Muchiitiko chekuti marwadzo akasimba zvakakwana, mukadzi anogona kutora ibuprofen kubatsira kubvisa marwadzo akadaro. Izvi zvisizvo zvinowanzoitika zvine mukana mukuru kubva kumwana wechipiri. Vashoma vanamai vatsva vanowanzove nezvakadai mushure mekubereka.
Kuwanda kwevana, kuri kuwedzera mukana wekutambura nezvambotaurwa. Iwo marwadzo anozoenderanawo nehukuru hwakawanda kana kumukadzi ari iye mwana wake wekutanga kana kana zvichipesana iye atove nemadziri akati wandei. Muchiitiko chekuti kumukadzi ndiko kubereka kwake kwekutanga, marwadzo kubva mukushatisa ari akanyorova, anoyeuchidza nezvekuenda kumwedzi.
Panyaya yekuzvara mapatya kana mucheche ane huremu hwakakura, marwadzo echakaipa akasimba pamwe nekusimba. Mumamiriro ezvinhu akadaro marwadzo akakosha, saka vanowanzo fanirwa kutora imwe mhando yemishonga kuti ibatsire kudzikamisa marwadzo emukati.
Nei zvakaipa zvichikosha
Chekupedzisira, zvinofanirwa kuratidzwa kuti zvisizvo zvakakosha pamwe neakasikwa, nekuti neimwe nzira, Mukadzi achangobva kununurwa anogona kutambura kubuda kweropa mukati uko kunogona kukanganisa hupenyu hwake. Izvo zvakakosha kuti mushure mekusununguka, chibereko chinodzokera zvishoma nezvishoma kunzvimbo yacho uye chinodzosera saizi yayo yechisikigo. Kudzvanywa uku kunobatsira kuti izvi zviitike uye hapana kubuda kwemukati mukati.
Muchidimbu, mukadzi uyo achangobva kuzvara mwana wake, haufanire kunetseka chero nguva nezve kuve nekubata kwakasimba kana zvisizvo mukati mechibereko chako. Kudzvinyirira uku kwakakosha kuitira kuti chibereko chizvimisike pachayo pasina matambudziko ezvasara zvingangodaro zvakakonzera kuendeswa.
Rangarira kuti zvakasikwa zvinofanirwa kutora nzira yazvo uye zvakakosha kuti chibereko chibve pamusha uye chiwedzerwe nekuda kwepamuviri, pedza nekudzokera kune saizi yayo uye kuzvimisikidza pachako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Ndezvipi zvakaipa?
Iyi ndiyo micheka yakabatana yemafemu akasimba emafashoni
Mhando dzakasiyana dzemacheya eimba yako yekudyira